၁၂ လရာသီခွင်မှာ ၁၃ ခုမြောက်နက္ခတ်တစ်လုံး NASA ထပ်တိုးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှား ပျံ့နှံ့ | သတင်းအချက်အလက်စိစစ်မှု
This NASA image released on October 9, 2019 shows the center of our Milky Way galaxy,as the Spitzer Space Telescope's infrared cameras penetrate much of the dust, revealing the stars of the crowded galactic center region. - The center of our galaxy isacrowded place: A black hole weighing4million times as much as our Sun is surrounded by millions of stars whipping around it at breakneck speeds. This extreme environment is bathed in intense ultraviolet light and X-ray radiation. Yet much of this activity is hidden from our view, obscured by vast swaths of interstellar dust. (Photo by HO / NASA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / NASA,JPL-CALTECH/SUSAN STOLOVY(SSC/CALTECH) - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS (AFP / Ho)
၁၂ လရာသီခွင်မှာ ၁၃ ခုမြောက်နက္ခတ်တစ်လုံး NASA ထပ်တိုးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှား ပျံ့နှံ့
Taylor Thompson Fuller, AFP နယူးဇီလန်နှင့်ပစိဖိတ်ကျွန်းများ, AFP မြန်မာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြသည့်နေ့စွဲ ကြာသပတေး 23 ဇူလိုင် 2020 အချိန် 06:15နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်သည့်နေ့စွဲ ကြာသပတေး 23 ဇူလိုင် 2020 အချိန် 07:12
အမေရိကန်အာကာသအေဂျင်စီ (NASA) အနေနဲ့ ၁၂ ရာသီခွင်မှာ ၁၃ ခုမြောက် ရာသီရုပ်တစ်ခုကိုထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်ပြီး “Ophiuchus” လို့ အမည်ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့ ပြောဆိုမှုတွေကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတုန်းက Facebook ပေါ်မှာ အကြိမ်ရေ ရာနဲ့ချီ ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီပြောဆိုမှုတွေဟာ မှားယွင်းနေပြီး NASA အနေနဲ့ ရာသီရုပ်အသစ်ကို ဖန်တီးခဲ့တာမျိုး မရှိဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒီပြောဆိုမှုတွေဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တုန်းကလည်း အွန်လိုင်းမှာပျံ့နှံ့ခဲ့ဖူးပြီး အဲဒီကတည်းက ပြန်လည်မျှဝေတဲ့အကြိမ်အရေအတွက် ထောင်နဲ့ချီ ရှိနေတာပါ။
အဲဒီပြောဆိုမှုတွေကို နယူးဇီလန်အခြေစိုက် Facebook page တစ်ခုက ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့တုန်းက ဒီလင့်ခ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေတဲ့အကြိမ်ရေ ၁၂၆ ကြိမ်ကျော် ရှိခဲ့ပါတယ်။
အထင်မြင်လွဲမှားစေတဲ့ပို့စ်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့က ရယူထားတဲ့ screenshot
အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားထားတဲ့ အဲဒီပို့စ်ပါစာသားတွေကတော့ “ရာသီခွင်မှာ ရာသီရုပ်အသစ်တစ်ခုကို NASA ထပ်ပေါင်းလိုက်ပြီ။ Ophiuchus ကို ကြိုဆိုပါတယ်” ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ပို့စ်နဲ့အတူ တွဲပါတဲ့ ဓာတ်ပုံမှာတော့ ၁၂ လရာသီခွင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မွေးလတွေကို ဖော်ပြပေးထားပြီး ထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ “Ophiuchus” ကတော့ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်ကြား မွေးတဲ့သူတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
၁၂ လရာသီခွင်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ က ဘေဘီလုံယဉ်ကျေးမှုအထွတ်အထိပ်ရောက်ခဲ့ချိန်မှာ ဘေဘီလုံပြည်သားပညာရှင်တွေ ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး နေနှစ်နဲ့အညီ ပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ မပြောင်းလဲဘဲ ရှိနေတဲ့ ကြယ်တာရာအစုအဝေးတွေကို ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ NASA ရဲ့အဆိုအရ သိရပါတယ်။
ရာသီရုပ်အသစ် ထပ်ပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့ အလားတူ ပြောဆိုမှုတွေကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတုန်းက Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်နဲ့ ဒီလင့်ခ်တွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းကလည်း အလားတူ အတုအယောင်သတင်းကို Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ အကြိမ်ရေ ထောင်နဲ့ချီပြန်လည်မျှဝေခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ အဲဒီသတင်းကိုပဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းက Twitter ရဲ့ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်နဲ့ ဒီလင့်ခ်တွေမှာလည်း ပြန်လည် မျှဝေခဲ့ကြတာ ရှိပါတယ်။
ဒီပြောဆိုမှုတွေဟာ မဟုတ်မှန်တဲ့အကြောင်း NASA က ပြန်ပြီး ငြင်းချက်ထုတ်ထားတာကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့တုန်းက Twitter ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ အခုလိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။ “မဟုတ်ပါဘူး။ ရာသီခွင်ကို ကျွန်တော်တို့ မပြောင်းပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်တုန်းက ဘေဘီလုံမြို့သားတွေ ရာသီရုပ်တွေကို ဖန်တီးကတည်းက ၁၃ ခုမြောက်ရာသီခွင်ရုပ်ကို ချန်ထားခဲ့ကြတာပါ”
NASA ရဲ့ Twitter ပို့စ် screenshot
NASA အနေနဲ့ “Ophiuchus” နဲ့ပတ်သက်လို့ အရင်ကလည်း ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတုန်းက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ရှင်းလင်းချက်ကို ဒီလင့်ခ်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ရှင်းလင်းချက်မှာ ပါဝင်တဲ့စာသားတစ်ချို့ကတော့ အခုလိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “NASA မှာ ကျွန်တော်တို့ နက္ခတ်တာရာတွေကို လေ့လာတာပါ၊ ဗေဒင်ကို လေ့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ရာသီသင်္ကေတကိုမှ ကျွန်တော်တို့ မပြောင်းခဲ့ပါဘူး။ နက္ခတ်ဗေဒပညာဟာ အာကာသထဲမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကို သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာတာပါ။ ဗေဒင်ဆိုတာက တခြားကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကြယ်တွေနဲ့ ဂြိုဟ်တွေရဲ့ အနေအထားက လူသားတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်လို့ လူတွေ ယုံကြည်ကြတာရှိပေမယ့် ဒါကို သိပ္ပံပညာမှာတော့ ထည့်သွင်းမစဉ်းစားပါဘူး”
ဘေဘီလုံပြည်က ပညာရှင်တွေဟာ ကြယ်တာရာ ၁၂ ခုကို ရာသီခွင်အတွက် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ရာသီရုပ်တစ်ခုစီအတွက် သက်ဆိုင်ရာလတွေကို ၁၂ လပြက္ခဒိန်မှာ သတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ NASA က ဆိုပါတယ်။
ဘေဘီလုံပြည်က ပညာရှင်တွေဟာ ၁၂ လပြက္ခဒိန်နဲ့ ကိုက်ညီဖို့အတွက် Ophiuchus ကို ချန်လှပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး NASA က ဒီလင့်ခ်မှာ ရှင်းပြပေးထားပါသေးတယ်။
၁၃ ခုမြောက်ကြယ်တာရာနဲ့ပတ်သက်လို့ သတင်းမှားဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းက ပျံ့နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ BBC က ရေးထားတဲ့သတင်းကို ဒီလင့်ခ်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။